रौतहटमा दम्पतीमाथि धारिलो हतियारले आक्रमण - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्रदेश २ रौतहटमा दम्पतीमाथि धारिलो हतियारले आक्रमण
सुरेश पन्त - March 15, 2020
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका र बेलडाडी गाउँपालिका सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत सीमा सर्भे टोलीले गरेको सीमा रेखांकनको स्थानियले ब्यापक विरोध गरिरहेका...
मौलिक संस्कृति पुस्तान्तरणमा समस्या
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - July 30, 2020
सभ्यताको विकास क्रममा मानिसले प्राप्त गरेका आध्यात्मिक एवं भौतिक मूल्यको सिंगो रूप नै संस्कृति हो । समाजमा परम्परादेखि चल्दै आएका विश्वास, चालचलन, संस्कार, रीतिरिवाज,...
कोरोना भाइरस संक्रमितमा पुरुष अत्यधिक
Breaking News प्रशान्त वली - April 23, 2020
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितमध्ये पुरुषको संख्या बढिरहेको पाइएको छ । संक्रमित ४६ मध्ये ३७ पुरुष र ९ महिला छन्...
प्रदेश ७ सुरेश पन्त - July 23, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 22, 2020
काठमाडौं । आगामी असारसम्ममा मेलम्आगामी असारसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने दाबी सरकारले गरेको छ । पटकपटक मिति सार्दै लगिएपछि जनताले विश्वास गर्न...
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - September 1, 2020
संक्रमित बढ्दै गए के गर्ने ? सरकार भन्छ : लक्षणविहीनलाई अस्पताल राख्दैनौं
Breaking News प्रशान्त वली - May 15, 2020
काठमाडौं । सरकारले संक्रमितको संख्या बढ्दै गए लक्षणविहीन तथा सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल नराख्ने योजना बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता...